Iran: Fanangonan-tsonia ho an’ireo Gadra Politika & Fianjeran’ny Fiaramanidina! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 3:42 GMT
Bilaogera Iraniana maromaro no nanasonia fanangonan-tsonia iray (taratasy) izay nangatahan'izy ireo ny famotsorana ireo gadra politika ao amin'ny fonjan'i Karaj Rejai Shahr. Nangatahana mba handefa solontena any amin'io fonja io ny Amnesty international, Vokovoko Mena sy ny fikambanana hafa mpanao asa soa. Toy izao no vakin'ny fangatahana:
“On the eighth week of the hunger strike of the political prisoners in Rejayi Shahr Prison, the government of Islamic Republic of Iran , has relocated the prisoners to facilities with harsher conditions, instead of assessing their demands.
“Tamin'ny herinandro fahavalo nitokonana tsy hihinan-kanina nataon'ireo gadra politika ao amin'ny Fonjan'i Rejayi Shahr, namindra ireo gadra tamin'ny toerana tsizarizary ny governemantan'ny Repoblika Islamika ao Iran, fa tsy mba nandinika ny fangatahan'izy ireo.
Miresaka momba ny fianjeran'ny fiaramanidina vaovaon'ny miaramila ny bilaogera sasany, izay nahafatesana olona 13, anisan'izany ireo mpitarika mpiambina revolisionera maromaro. FM Sokhan, mpanao gazety sady bilaogera monina ao Iran, nilaza fa vao avy nividy fiaramanidina Rosiana sy Shinoa efa nampiasaina i Iran. Tsy maintsy miandry fianjerana fiaramanidina vaovao isika.
Zannevesht, Ramatoa Parastoo Dokohi avy ao Iran, nilaza fa tsy afaka miresaka momba ny firaisana tsikombakomba na olana ara-teknika mikasika ity loza ity isika. Satria tsy afaka mahazo vaovao isika. NasimDasht, bilaogera ao Iran nilaza hoe:
Caneh, bilaogera monina any Iran, nilaza fa tsy mieritreritra firaisana tsikombakomba hamono mpiambina revolisionera izy. Zavatra maro fotsiny no tsy mandeha ao Iran satria tsy misy olona amin'ny toerana sahaza na tsy misy olona miraharaha ny asany.